सफल बन्ने हो ? यी ७ कुरालाई ध्यान दिनुस् « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
सफल बन्ने हो ? यी ७ कुरालाई ध्यान दिनुस्
३ पुष २०७४, सोमबार २१:११
तपाईलाई आफ्नो जिवनमा सफलता चाहिन्छ भने आफ्नो दिमागलाई पोजेटिभ राख्नुको साथ साथै खानपिन शैलीलाई पनि स्वस्थ्यवद्र्धक राख्नु पर्छ । करियरको सफलताको लागि ७ नेगेटिभ कुरालाई आफैबाट बचाउन आवश्यक छ । केही आवश्यक सुत्रहरु प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।
१) अलार्मलाई वेवस्ता नगर्नुस्
बिहानै उठ्नको लागि हामी अलार्म लगाउछौ। तर, जब तपाईको अलार्म बज्न थाल्छ तब त्यसलाई बन्द गरेर हामी फेरि सुत्न पट्टी लाग्छौँ । करियरमा आखिर तपाई सफल हुने हो भने बिहानै उठ्न आवश्य छ । त्यसैले अलार्म बज्दा त्यसलाई वेवस्ता नगर्नुस् किनकी त्यसले तपाईको करियर बनाउन सधै सर्तक बनाउन सहयोगी बन्ने कार्य गर्छ ।
२) खराब खाना र खाजबाट टाढै बस्नुस्
भनिन्छ स्वास्थ्य नै ठूलो धन हो । करियरमा सफलता पाउनको लागि शरिरलाई स्वस्थ्य राख्न अत्यावश्यक । जति शास फेर्न तपाईलाई स्वच्छ हावाको जरुरी छ । त्यतीनै करियरमा सफलता पाउन स्वस्थ खानेकुरा खान आवश्यक हुन्छ । त्यसैले थोरै खाने र नियमित केही न केही खाने गर्नु पर्छ । खाली पेटका कारण विभिन्न रोगहरु आउन पनि सक्छ ।र, यसले तपाईको सपनालाई हानी पुर्याउछ ।
३) फजुल खर्च बन्द गर्नुस्
यदि तपाई करियरमा सफलता पाउनु हुन्छ भने फजुल खर्च बन्द गर्नुस् । फजुल खर्च बन्द गरिएन भने करियरमा लामो समय सम्म असर गर्छ । खर्च नियन्त्रण गर्दै जानुभयो भने सफलताको बाटो नजिकबाट नै देख्न सकिन्छ । भनिन्छ नि थोपा थोपा मिलेर नै समुन्द्र बन्छ ।
४) मनले नमानेको कुरा नगर्नुस
करियर सफलताको एउटा अहम सिढी नै मन हो । यस्तो काम कहिले पनि नगर्नुसु जहाँ मनले तपाई लाई इजाजत नै दिदैन ।
५ ) ढिलो नगर्नुस्
समयको पालना करियरमा सफलता पाउनको लागि अत्यावश्यक छ । कुनै काममा ११ बजे नै पुग्नु पर्ने छ भने केही मिनेट अगाडी नै पुग्ने बानीको विकास हुन आवश्यक छ । तपाईमा ढिलो गर्ने बानी भए यो हानिकारक छ । यसलाई तुरुन्त निकाल्न आवश्यक छ ।
६) बहाना नबनाउनुस्
तपाईबाट कुनै गल्ती भयो भने त्यसमा विनम्रता पुर्वक माफि माग्नुस् । काम बिग्रे बहाना नबनाउनु न कसैलाई दोषी नदेखाउनुस् । अरुलाई दोष देखाउने र बहाना बनाउने बानी तपाईको करियरको लागि घातक हुन सक्छ ।
७) कसैलाई पनि शंका नगर्नुस्
भनिन्छ दुनिया विश्वासमा चलेको छ । करियरको सफलताको लागि यो सुत्रवाक्य सावित नै हुन्छ । हामीलाई हरेका कुरालाई शंकाले हर्ने बानी नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । हामीले शंका मात्रै गर्ने बानीको विकासले गर्दा घाटा आफैलाई हुन्छ । यसले आफ्नो करियरको मुल बिन्दुलाई नै असर गर्छ ।
प्रकाशित : ३ पुष २०७४, सोमबार २१:११